5 Top Tips Fa Brisbane By Train | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > 5 Top Tips Fa Brisbane By Train
(Last Nohavaozina: 09/07/2021)
Brisbane renivohitr'i Queensland dia ary nitso-drano ny A-list manintona toy ny Sea World, ny bozaka sy ny zaridaina tsara Atsimo Bank, ary Story Bridge, ary maro hafa - Australia's lava indrindra cantilever tetezana.
Izany ihany koa ny famoronana tanàna, amin'ny kanto tranom-bakoka sy ny lalan- ary Chic trano fisotroana kafe tsarotra maro no miandry, miampy izany ny tonga lafatra ho an'ny springboard Gold Coast tora-pasika, ranomasina, ary surf.
Raha toa ianao mba hampiofanana ampahany Travel, rail rafitra no ivon'ny an-tanàna ny foto-drafitr'asa fitaterana ary ny ara-kolontsaina tantara.
Koa raha te-hahita Brisbane lamasinina, ireto misy toro-hevitra dimy ambony.
Any amin'ny Avaratra Coast tsipika, Central Station no tanàna tambajotra tena peo ary no misy Bang ao am-Brisbane toekarena ao afovoan-distrika.
Nisokatra indray in 1889, ny endrika ivelany isehoan'ny mahazatra overlooks Anzac Square ary izany no tena lalan-dra ho an'ny lalana manompo Queensland sy ny sisa Aostralia.
Raha te toby akaiky ny, Oaks Charlotte Towers Hotel dia mampitolagaga pick - fa tsy lafo sy villa prohibitively Suites hifantoka amin'ny tanàna skyline.
Brisbane Metro tsy mbola miasa - fa ny faobe Rapid Transit tanteraka rafitra famatsiam-bola, manomboka amin'ny fanorenana mafy, ary tamin'ity taona ity dia tokony misokatra ho an'ny besinimaro amin'ny alalan'ny 2023.
amin'ny 21 kilaometatra ela, Ho azy hanompo 18 gara manerana ny tanàna, ary mponina ary mpizaha tany mitovy dia ho afaka mitsambikina eo sy eny izay tiany.
Izany dia midika hoe niaritra A $ 944 tapitrisa, fa soa mihena ahitana fitohanana sy ny tsy fanerena ny tratran'ny fikatonana Brisbane fiara fitateram-bahoaka.
Steam Train Alahady
Raha te misy fipoahana tamin'ny lasa (amin'ny fomba kokoa noho ny iray), ny loha tsy mahazo manao Brisbane Roma Street Station ho an'ny tapaka Steam Train Alahady hetsika.
Dingana ao anatin'ny hazo genteel kalesy ary avy hatrany ianao ho Nentina niverina tany amin'ny vanim-potoana tsara tarehy kokoa, rehefa sy ny fianakavianao alefa miadana ny lasa Brisbane Toerana mahafinaritra indrindra toerana.
Tena mahafinaritra ho an'ny sokajin-taona rehetra, fa ankizy ary ny be taona no tena babo tamin 'ny ody.
Ipswich dia any atsimo andrefan'ny faritra metropolitan Brisbane ary eo no ahitanao ilay tranom-bakoka Workshops Rail mahafinaritra.
Tena misy sy manentana fanahy ifandrimbonana lova traikefa mitoetra ao Aostralia tranainy indrindra lalamby atrikasa ary feno tsy fahita firy etona locomotives, milina indostrialy goavana, sy ny haino aman-jery maro-fampirantiana.
Rehefa te-pampianarana sy mahafinaritra Excursion amin'izy mianakavy rehetra, mijery intsony.
Brisbane Airport dia sahirana fitateram-Hub izany Nampiroborobo ny trano fisotroana kafe toy Fonzie Abbot, bara toa ny Transit Tavern, ary fijanonana mpamatsy toy Looking4.com.
Saingy ho an'ny Mpisantatra maro izay tonga amin'ny rivotra, ny zavatra tsara indrindra momba izany dia Airtrain, ny 13 km commuter lalamby tsipika izay haingana Efa spiriting lavitra avy ao amin'ny seranam-piaramanidina ny Central Station satria 2001.
Taorian'ny nandreraka sidina, Airtrain mitondra anareo ho any afovoan-tanàna ao fotsiny 20 minutes - pretty miavaka.
Araho ny toro-hevitra ho an'ny fikarohana dimy Brisbane lamasinina ianao, ary hijanona eo amin'ny lalana ho faran'izay fialan-tsasatra.
Manana toro-hevitra ho an'ny Brisbane fiaran-dalamby mandeha? Zarao azy ho amin'ny fanehoan-kevitra fizarana ary raha Mila lamasinina mamonjy fiaran-dalamby.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary fotsiny hanome voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ja ny / en na / de kokoa fiteny.
#brisbane #railtips Aostralia Brisbane by train fiaran-dalamby soso-kevitra
Robbie Handy dia avy any Fife any Scotland ary nahaliana azy tamin'ny lamasinina hatramin'ny nahitany azy ireo nitanjozotra tao amin'ny The Forth Bridge - iray amin'ireo zava-mahatalanjona injeniera eto an-tany. Ankoatra ny lamasinina, fitaterana, ary mandeha, mahafinaritra azy ny manoratra momba ny zavakanto, kolontsaina, ary ny politika amin'ny teny anglisy, Skoto, ary Patois Jamaikana. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
New Train Links Azia Amin'ny Eoropa